02 Kuomesa hovhoni
Air Blast Kuomesa hovhoni
Vaccum Kuomesa hovhoni
High Temperature hovhoni
Hot-mhepo Sterilizer hovhoni
siringi akatasva dehumidifier
05 Home mudziyo
Drug Kugadzikana Test Chamber
Electro- chafariz mazai chenguva duku
nemakemikari mazai chenguva duku
CO2 mazai chenguva duku
07.Egg mazai chenguva duku
Hot Sale Large Automatic 1584 Chicken Egg mazai chenguva duku
Industrial Use Industrial Kuomesa hovhoni
160L Water Jacketed rabhoritari CO2 mazai chenguva duku mutengo
4 Drum HDPE teura Containment nhovo
Stainless Steel Laboratory Vacuum hovhoni pamwe Pump
High uye Low Temperature Humidity Environment Test C ...
Vacuum Kuomesa Equipment
Stainless Steel Laboratory Vacuum hovhoni
133Pa Laboratory Vacuum hovhoni
± 1 ℃ Laboratory Vacuum hovhoni
+5 ~ 40 ℃ Laboratory Vacuum hovhoni
2pcs Laboratory Vacuum hovhoni
No mhiri kwemakungwa service yakapiwa
50 Piece / Pieces pamwedzi Laboratory Vacuum hovhoni
Laboratory Vacuum hovhoni Package: Plywood nyaya kana muzinga atorwa pasuru.
Mhando Zvikuru Kuomesa hovhoni
Product Name: Laboratory Vacuum hovhoni pamwe Pump
Laboratory Vacuum hovhoni Application
girazi zvigadzirwa indasitiri kubvisa Vacuum sefuro;
maindasitiri uye kuchera emakambani, kumayunivhesiti, kwesainzi uye mumarabhoritari siyana;
zvinhu zvakachengetwa pasi Vacuum kana zvedongo, guruu, pendi, matoyi mapurasitiki, nebwe rwokugadzira, makenduru, purinda cartridges.
Laboratory Vacuum hovhoni Features
Streamline chinhu chakakombama magadzirirwo Akapayona nokuda goko ushamwari-anokungurutsirwa simbi yairema electrostatic pfapfaidzo;
Liner wakaumbwa Stainless simbi, Semi-tenderera mativi zvakagadzirwa yamunenge kuchenesa;
Tightness pakati chassis pamukova zvachose zvechisimba murau maererano anoishandisa, zvinonyatsorehwa Maumbirwe silicone rabha musuo zvisimbiso, nechokwadi yakakwirira vacuüm chamber;
Rectangular nemamiriro womunharaunda Studio, saka kuti kufadza inobudirira vhoriyamu, pamwe simbi nemikova, musuo kaviri girazi bara-chiratidzo, saka kuti kudzidzisa zvinhu kubvumira vanoshandisa kuchengeta Studio panguva peziso.
Laboratory Vacuum hovhoni Specifcation
Product Name Laboratory Vacuum hovhoni
Laboratory Vacuum hovhoni sherefu 2 Piece
Laboratory Vacuum hovhoni Voltage 220V 50HZ
kushanda Temperature + 5-40 ℃
Temp. chisarudzo / Temp. kusiyana-siyana 0.1 ℃ / ± 1 ℃
Laboratory Vacuum hovhoni rokunze Material simbi , ukobvu sezvo 1.2mm
Laboratory Vacuum hovhoni Inside Material SS, thinckness sezvo 3mm
Rokunze Size (mm) 595 * 600 * 1245mm
Laboratory Vacuum hovhoni Characteristics
Made yepamusoro inotonhorera-anokungurutsirwa simbi yairema, vapedzerana electrostatic upfu spraying, nguvo zvakaoma uye yakasimba, ine simba ngura nemishonga.
The Studio nokuti yepamusoro Stainless simbi yairema, kumativi chimiro, mvere, mvere, nyore kuchenesa.
Housing uye Studio, achizadza vakanaka girazi shinda kumbogadzirwa kuti mudziye zvokunyama, ane zvakanaka kumbogadzirwa kuti mudziye chinosara zvinobudirira pave rakarurama kugadzikana tembiricha iri cabinet uye kushandiswa kwezvakatipoteredza.
Mukova nokuda kaviri uriri girazi mamiriro, mashoko neshungu muchoto inogona kuchengetwa pachena, uye vane zvakanaka kupisa kuputira maturo. Anogona kunyatsokurukura kudzivisa kutsva opareta.
Studio uye kurwa nokupisa nemishonga rabha chisimbiso mhete pakati pamukova girazi, nechokwadi kubudirira yakakwirira Vacuum dhigirii mubhokisi.
Chokunze pose hita iri yakaiswa pamadziro mumusangano yomukati, uye kuvandudza zvakafanana zviri tembiricha iri cabinet napo, uye kuti aivabatsira mukamuri yakachena.
The tembiricha kuzvidzora nokuva microcomputer akangwara digitaalinen Michina kugadzira, pamwe maindasitiri PID nokuzvidzora marongero uye kushanda zvina miviri akatungamirira Windows chiratidzo, tembiricha kudzora zvakarurama, simba Anti jamming mano, uye nokushanda zviri nyore chaizvo.
Laboratory Vacuum hovhoni Zvingakudetsera Accessories
RS485 chiteshi uye kutaurirana
25mm / 50mm / 100mm waya chengarava
Independent vakaomerwa tembiricha controller
Intellective nzira tembiricha controller
Intellective mvura mechanical nzira temperture controller
Laboratory Vacuum hovhoni Related Products
Laboratory Vacuum hovhoni Packaging & Shipping
Laboratory Vacuum hovhoni Packaging: Plywood kana ekisipoti atorwa.
Laboratory Vacuum hovhoni Delivery: Within 15 kushanda mazuva.
Sezvo isu dzakatangwa muna 2004 gore taigara vanobatisisa pfungwa "basa uye unhu pave zvakanaka chepamusoro hurongwa. "
Kubudirira kwenyu ndiko kwedu kunobva. boka redu akabata mutemo "Unhu wokutanga, vanoshandisa pakutanga". We noushamwari zvose mudiwa musha uye kunze kwenyika pamwe nesu.
1. Unogona gadzirisa chigadzirwa?
Chokwadi, tinogona gadzirisa chero zvigadzirwa maererano vatengi kuti zvinodiwa. Akadai voltage, chivhariso uye pasherufu.
2. Ndeipi muripo mazwi Munoiteiko?
PayPal, West Union, T / T, Ini add ukaisa hurongwa yako pamusoro alibaba, unogona kubhadhara nokuda kadhi
(100% muripo pachine.)
3. Ndeipi ainge atumirwa iripo?
By gungwa, nendege, nokuda taura kana sezvo zvinodiwa wako.
4. Ndeipi nyika iwe wanga aivigirwa?
Takapiwa aivigirwa kunyika dzakawanda, zvose kupfuura zvose pasi pose, kufanana Malaysia, Vietnam, Thailand, United States, France, Spain, Mexico, Dubai, Japan, Korea, Germany, Porland Nezvimwewo
5. rinhiko ndiyo kukurukura nguva?
Mukati 15 kushanda mazuva.
Previous: Lab tembiricha uye mwando mazai chenguva duku zvidukuduku
Next: Hot Sale Large Automatic 1584 Chicken Egg mazai chenguva duku
Humidity Control CD DVD Storage Cabinet nokuda Lon ...
Adjustable Humidistat nyatsoshanda Dehumidificatio ...
Quick Kuomesa Wall hwavapo High Speed ​​Auto Hand ...
Color Logo Customized Adjustable mucheka fuertes ...
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu, tapota nesu chero nguva uye tichava nekuonana mumaawa 24.